Muimbi weRap Frank Ocean anosaina kusarudzika paApple Music | Ndinobva mac
Muimbi weRap Frank Ocean anosaina kusarudzika paApple Music
Vanoverengeka ndivo maartist avo vakazvitsaura kubva kune vamwe vese nekuburitswa kwemadhisiki avo chete evashandisi veApple Music (Kate Perry kana Travis Scott ndiye achangoburwa), Apple inomhanyisa mimhanzi sevhisi. Ino nguva rapper Frank Ocean anotevera pane iyo runyorwa kuti uzviite uye achaburitsa LP yake nyowani, Vakomana Musacheme, chete kwevhiki dzinoverengeka pa Cupertino Vakomana 'Music Service. Zvinotaridza kuti pane maartist maartist akafunga kuti ino inguva yakanaka yekubvunza Apple "nezve mabhenefiti" ekuburitsa maalbum avo matsva chete kune avo vashandisi.
Parizvino, seApple Music sevhisi iri kunyatso kuve pfupa rakaoma pamasevhisi akafanana maererano nekutenderera mumhanzi. Kunyange chiri chokwadi kuti pakutanga hapana munhu anobhejera zvakawanda pairi nekuve neyekutanga yemahara Spotify sevhisi (ine kushambadza uye zvimwe zvisingakwanisike) kune vashandisi, ikozvino Apple Music iri kuita musiyano wakakosha pakati peaya masevhisi emimhanzi uye kana akagadzirwa nevanoverengeka vevaimbi vakatanhamara chete, ipapo iwo mikana yakawanda iyo yekuve vanobudirira.
Saka kana iwe uri fan of Frank Ocean uye uchida kuve pakati pevokutanga kuteerera kune iyo nyowani dambarefu, uchafanirwa kumira neApple Music sevhisi, gadzira account kana iwe usinga fanirwe kuwana iyo kana yaburitswa kana mirira vhiki mbiri dzekusarudzika dzauinadzo neApple Music. Rangarira kuti mwedzi mitatu yekutanga kana usina account inoshanda mahara paApple Music, saka kana pasina zvikonzero kana usati waimisikidza iwe unoziva ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Muimbi weRap Frank Ocean anosaina kusarudzika paApple Music
Muimbi weRap? zvakakomba? saka ivo vari kuenda kuchinotora icho?
iCloud Drive vs. Google Drive, ndeipi iri nani?
Wedzera zvese zviitiko zveMitambo yeOlympic muBrazil kukendendende yeMac yedu